* Light Of Myanmar *: Thomas Jefferson ဆေးရုံမှ တရားပြသင်တန်း
Posted by * In Search of Truth * at 9:19 PM
လာလည် သွားပါတယ် ကိုဇော်မျိုးရေ ... စီပုံးမှာ အော်မရလို့ ... ၀ိပဿနာ လာရောက် ဖတ်ရှု လေ့လာ သွားပါတယ် ... :) အဆင်ပြေပါစေ ... :P
Come on! Please do what you do best, attacking on Pro Demo People. That give me loads of fun with you. Don't quit the job, sitting on the fence or in search of truth.
ကို top ရဲ့မှတ်ချက်ဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်တာနဲ့ ကလေးဆန်တဲ့ ပြောဆိုချက်ပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ နောင်မှာ အခုလို comment တွေကို ဖျက်ပြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင်းကျိုးဆီလျော်ပြီး တည်တည်တံ့တံ့ အချက်ကျကျ ပြောဆိုတဲ့ comment များရေးတတ်လာရေးအတွက်ပါ။ တနည်းပြောရရင် မှန်ကန်သော ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ပါ။